Kuitwa mutsvene rinowanikwa nevateveri ziviso vaJesu | Apg29
Noutsvene uye ruponeso kana kururamiswa, haisi chete.
Ruponeso kana kururamiswa, kunoitika wechipiri tava kutendeukira kuna Jesu, uye iye zvinofamba mumwoyo yedu. Kucheneswa Zvisinei, chinhu hwose chichiitwa, apo tichifamba Jesu achikura sezvo vanhu uye vaKristu, Jesu anogona kunge zvakawanda kuoneka uye kuburikidza hwedu, apo nyika uye nyama kuri kushoma kweupenyu hwedu.
John anoita rondedzero chii rokuti nyika nokuda 1 Johani 2: 15-16
" Musada nyika kana zvinhu zviri munyika. Kana munhu achida nyika haisi rudo rwaBaba maari. Nokuti zvose zviri munyika, nyama uye kuchiva kwameso uye kuzvikudza zvakanaka upenyu, hazvina kubva kuna Baba asi zvinobva kunyika. "
1 VaTesaronika 5:23 inoti : "May Mwari werugare amene ngaakuitei vatsvene zvakazara ..." 2 VaTesaronika 2:13 inoti "... kubudikidza nekuitwa vatsvene kweMweya nerutendo rwechokwadi", VaHebheru 2:11 inotaura Jesu uyo vatsvene uye avo zvakatsaurwa. Shoko isu nokutsaurwa: John 17:17 "Vaitei vatsvene muchokwadi; shoko renyu ndiro chokwadi."
The mutendi anozvipa kuwanikwa basa chokucheneswa muupenyu hwavo: 1 VaTesaronika 4: 7.8.
Hatizofi achadzivirira zvivi muupenyu hwedu! asi kana Mweya Mutsvene hunotaura tsitsi isu zvaakaita, tinoreurura pamberi paMwari, zvino Mwari achatikanganwira uye nesu pakusarurama kururama kose. 1 John 1: 9
Tiri akadana upenyu utsvene
" Mwari haana kutidanira kutsvina, asi kuti upenyu utsvene. Naizvozvo, zvino iri anoramba uku haasi kuramba munhu asi Mwari, iye akakupa Mweya Mutsvene wake. " 1 Th 4: 7, 8
MuRoma 6:19 inotikurudzira kuti kubvunza nhengo dzedu basa rokururama, kucheneswa, uye 2 VaKorinde 7: 1 rinotikurudzira kuti uMwari tichikwanisa utsvene.
Ndinofunga kutya Mwari wechokwadi ari muupenyu vatendi simba rehondo kutsvaka utsvene muupenyu hwavo. Chii Ndinoda zvakasimba zvinosimbisa!
In chiedza utsvene hwaMwari anoberekwa ari kutya Mwari wechokwadi.
Iye wakafanira rukudzo, kuzviisa pasi, kuteerera, mwoyo yedu vanozvininipisa nokuonga uye achikudza.
Zvinokosha kuti varege kundorwa uye kusateerera kana Mweya Mutsvene anoratidza nesu chinhu muShoko, apo Mwari anopenya pamusoro chinhu apo anoda kuona shanduko muupenyu hwedu. Apo Mwari anoti; Izvi hazvina kufadza kwandiri, kuti ndinoda here kumisa pedyo, kana panguva dzakadaro, chete kuiteerera, kana kufunga, hazvina kudaro ngozi, saka raMwari Mutsvene neanotambudza. "Kwete kushungurudza Mweya Mutsvene waMwari, uyo awakagashira sechisimbiso zuva rokudzikinurwa." VaEfeso 4:30.
Kana nguva apo ukasateerera Ishe anotaura, kashoma vakaona sezvo inzwi reMweya yakaderera-anokosha mune munhu womukati, mumwe ave "zvokomara". Anotaura kazhinji chinyararire mukati medu.
Ndinokupa muenzaniso kubva muupenyu hwangu. Pakuvamba Ndakatarisa kazhinji paTV. Ini ipapo zvakanga zvakajeka ruzivo apo ndakaona mamwe mapurogiramu TV, kana apo zvakanga zvikuru anonyadzisira kana ane chinhu chisakanaka, sei Mweya Mutsvene mukati mangu vakabvuma uye akava akatambudzika. Zvingava Somuenzaniso chinhu chinofadza COP anoratidza chirongwa kana mutambo kuti ndakawana anonakidza, uye sezvo ndakacherekedza. Kana wakapfuura nguva, uye ndakanga kuteerera nyevero Mutsvene, uye ndichiona iri chirongwa akadai, saka ndini ndakagamuchira asisiri zvakajeka Mutsvene dambudziko yakaderera-anokosha. Ndakaona vasisiri sei akasvika akatambudzika.
Chii chakanga chaitika? Zvakanaka, chii chakaitika kwakanga kuti mwoyo wangu wakanga zvokomara toreva utsvene hwaMwari! inzwi Spirit panyaya kuti chaizvo chinhu chakanga akapotsa arega. appallingly
Zvino zvichava shoma terevhizheni. Funga isu tose tine nzvimbo kuti Mweya waMwari rinoratidza kuti asingaiti timufadze, uye apo tinofanira kupfidza.
Help vatsvene kwacho iripo. Tinoziva zvokuti zvose kangani isu vakaedza, nomumba kuedza kwavaiita kuva "Vatsvene" vatsvene vaKristu, asi chii chatinofanira kuita izvi. Tinokanganwa, kana handizivi sei Mwari anotibatsira vatsvene kwacho.
Ezekieri 11:19, 20, tinoverenga
" Ndichavapa moyo mumwe, uye mweya mutsva ndichaisa mukati kwavari. Ini achabvisa pamaware mwoyo kubva munyama yavo uye kuvapa mwoyo wenyama, kuti vafambe nemitemo yangu, nokuchengeta mirairo yangu, muiite. Vachava vanhu vangu, uye ini ndichava Mwari wavo "
uye muna VaHebheru 8:10, tinoverenga chipikirwa chete. VaGaratiya 5:16 "Chii Ndinoda kutaura izvi: Fambai muMweya, hamuzokwanisi kuchiva kwenyama," uye ndima 25, ". Kana tichirarama noMweya, ngatifambevo noMweya"
It asi akandinakira ataura zvakajeka kwandiri chido ichi kuva saJesu vachiyaruka, ndicho mashoko aJesu ari John 15. Pano Jesu anotaura pachake somuzambiringa wechokwadi / muzambiringa wechokwadi. Anoti kuti zviri chete kuburikidza kuti tinogara maari iye muzambiringa, michero pachamera. Anoti kuti förblivandet pamuzambiringa kuchaita bazi (vi) kubereka akapfuma muchero. Jesu anoti mundima 5 "... kunze kwangu hamugoni kuita chinhu."
Bazi anogona simba kwete kana kuedza kumanikidzira chero muchero.
basa nyasha matiri Mweya, kuti kuitika Community Jesu pachake.
Ndinofunga kuti muto zvomuzambiringa, izvo zvibereko, mazambiringa upenyu, ndinofunga inogona akati mufananidzo Mutsvene, hwake noutano upenyu.
" Hama Uyezve (nehanzvadzi), zvose kuti ichokwadi uye mutsigo, wakarurama, zvakachena, zvose zvinodikanwa, uye kupima, hungu, zvose zvinonzi kunaka uye akafanira kurumbidzwa, funga pamusoro pezvinhu izvi."
Kuwedzera My: kuzviraramira izvi, taura zvinhu.